Home / Trading / Forex Tools / Current Positions Trading
Ny Current Your Positions Trading Positions
Ny hetsika ara-barotra amin'izao fotoana izao (CTP) dia manolotra fanazavana amin'ny paositry ny vola 16 isam-bolana. Ny singa ara-barotra mifandraika amin'ny fividianana / fivarotana tombontsoa dia natambatra mba hahitana ny cluster ny liquidity. Ity fampahalalana ity dia havaozina imbetsaka mandritra ny fivoriana ara-barotra miaraka amin'ireo toerana farany fantatra. Ny toerana dia manara-maso ny isam-bolana rehetra 15 ary avy eo voafafa amin'ny rafitra rehefa voavolavolan'ny hetsiky ny tsena.
CTP amin'ny Fitaovana tsy miankina
Amin'ny alalan'ity widget ity dia afaka manararaotra ny fampahalalana azo ampiasaina ny mpanjifantsika; Ny mpanjifany dia manana endri-tsoratry ny fampisongadinana izay mampiseho ny vidin'ny vidin-javatra, toy ny vidin'ny fividianana sy ny fivarotana vidin'ny vidiny. Ny data dia marina; Nangonina sy navotsotra izy ireo ary tsy nisy mihitsy ny famoahana ireo vokatra ofisialy.
CTP amin'ny ampahany mitambatra
Ity widget ity dia afaka manaporofo fa fitaovana tena ilaina tokoa raha ampifandraisina amin'ny fanohanana sy ny fanoherana ny fanoherana. Ny toerana voatondro sy ny fividianana / fivarotana ny fahalianana dia nalaina avy amin'ireo mpanolo-kevitra mpandraharaha ara-barotra miaraka amin'ireo mpihaino marobe maneho hevitra amin'ireto sehatra ireto Ny vidin'ny vidiny dia azo antoka kokoa.
Toeram-piasana amin'izao fotoana izao